Ịmalite njem nlegharị anya obodo Europe ugbu a siri ike iji kwado mkpa nke ndị obodo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Ịmalite njem nlegharị anya obodo Europe ugbu a siri ike iji kwado mkpa nke ndị obodo
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Akụkọ na -agbasa na Spain • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ịmalite njem nlegharị anya obodo Europe ugbu a siri ike iji kwado mkpa nke ndị obodo.
Ka obodo ndị Europe na-ewu ewu na-emeghekwa ndị njem nlegharị anya mba ụwa n'ụzọ zuru ezu, ndị ọrụ njem nlegharị anya ga-eji oge mmụba ọhụrụ a iji nweta nguzozi n'etiti uru akụ na ụba yana ịhụ na ndụ dị mma maka ndị bi.
Ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ enweela mmetụta dị ukwuu na njem nlegharị anya obodo Europe.
Ndị Europe na-amalite ịlaghachi n'isi obodo n'ofe Europe na obi ike nke ịbụ ndị a ga-eji okpukpu abụọ mee ihe.
Tupu oria ojoo COVID-19, mmụba mgbe niile na njem nlegharị anya mba ụwa na obodo ndị dị ka Barcelona, ​​​​Amsterdam na Prague butere iwe n'etiti obodo.
Kemgbe mmalite nke ndị na-ebu ọnụ ala na ụdị mmefu ego nke ụlọ, ewu ewu nke njem nlegharị anya ezumike obodo abawanyela nke ukwuu n'ime njem intra-continental gafee Europe. Dị ka ndị nyocha ụlọ ọrụ si kwuo, 38% nke ndị zara ajụjụ kwuru na ha na-emekarị ụdị njem a, na-eme ka ọ bụrụ nke atọ kasị ewu ewu n'ụwa nile, n'azụ njem nlegharị anya anyanwụ na osimiri na ndị enyi na ndị ikwu (VFR).
Tupu oria ojoo COVID-19, otu afọ na-aga n'ihu (YoY) na-abawanye na njem nlegharị anya mba ụwa na obodo dịka. Barcelona, Amsterdam na Prague kpalitere iwe n'etiti obodo, na-ebute nrụgide n'ahụ ọchịchị ime obodo.
Agbanyeghi na oria ojoo a enweela nnukwu mmetụta na njem nlegharị anya obodo, ebe ndị njem na-achọ izere mpaghara ndị mmadụ bi na 2020 na 2021, ndị Europe na-amalite ịlaghachi n'isi obodo n'ofe Europe na ntụkwasị obi nke ịbụ ndị a ga-eji okpukpu abụọ na mmachi na-ebelata. emeghi ihe.
Ka obodo ndị Europe na-ewu ewu na-emeghekwa ndị njem nlegharị anya mba ụwa n'ụzọ zuru ezu, ndị ọrụ njem nlegharị anya ga-eji oge mmụba ọhụrụ a iji nweta nguzozi n'etiti uru akụ na ụba yana ịhụ na ndụ dị mma maka ndị bi. Ka ihe atụ, reopening nke Prague ka njem nlegharị anya mba ụwa ga-adọrọ mmasị ileba anya.
N'ime ọrịa a, ndị ọrụ njem nlegharị anya na Prague kwuru ebumnobi ha iji oge odaala mepụta ụdị njem nlegharị anya obodo na-adigide maka ọdịnihu, nke ga-amasị ndị bi. Tupu ọrịa a na-efe efe, obodo ahụ nọ na-enwe nsogbu na ndị njem nlegharị anya na-emechi emechi obodo ahụ ma na-ebelata ịdịmma ndụ nke ndị obodo. PragueEkwuru na nlebara anya ọhụrụ nke ọrịa na-efe efe kpatara bụ ịdọta ndị njem nlegharị anya 'oke uru' ga-anọ ogologo oge, na-emefu karịa, na n'ozuzu ha na-eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'oge njem ha.
Ọchịchọ a sitere n'aka ndị ọrụ njem nlegharị anya nke Prague imegharị aha site na mkpọsa ahịa na ịkwanye usoro iwu ọhụrụ nwere ike ịdịte aka n'ihi mmetụta akụ na ụba nke ọrịa a na-aga n'ihu. Ebe njem nlegharị anya na Czech Republic ka bụ naanị obere akụkụ nke ọkwa oria ojoo a, Czech Tourism Union akpọọla ndị ọchịchị Prague ka ha mee ngwa ngwa iji gbochie nsogbu akụ na ụba.
Site na nkwado ego metụtara COVID na-akwụsị ugbu a maka ọtụtụ azụmaahịa metụtara njem nlegharị anya gafee Europe, isi obodo Europe nwere ike ilekwasị anya ọzọ n'ịdị mma iji kpalite mgbake akụ na ụba.
Mgbanwe a nwere ike ime na atụmatụ nwere ike iwe ọtụtụ ndị obodo na-enweghị ịdabere na njem nlegharị anya maka mmepụta ego. Agbanyeghị, ekwesịrị ịnakwere na ọtụtụ ndị obodo ga-agbakwa mbọ maka ịlaghachi njem nlegharị anya ka ha wee nwee ike imeziwanye ego nke onwe ha. Nlaghachi zuru oke nke njem nlegharị anya ezumike obodo n'ime afọ ndị na-abịanụ na-eme ka ndị isi obodo na-eme ihe siri ike, na nke ga-akpata esemokwu mgbe niile.